World March mechiri na Madrid - Marchwa Machị
You chọrọ itinye aka na njem ahụ? Anyị na-akọwa otú
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » World March mechiri na Madrid
World March mechiri na Madrid
05 / 03 / 2020 04 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
Emechi ihe atụ ahụ ga-eme na Sọnde, Machị asatọ, n’elekere iri na abụọ na Puerta del Sol
Afọ abụọ nke World World maka Udo na Ọgba aghara mechiri njem ya na Madrid. Ọpụpụ na Ọktọba 2, 2019 (Daybọchị Mba Ọchịchị Na-adịghị Eme Ihe Ike) na Madrid, World March maka Udo na Ọdịghị Anụmanụ ga-ejedebe njem ya mgbe ọ gafesịrị kọntinent ise ahụ ọnwa ise. Site na nkwuputa nke World World 2009 2010, nke jiri ụbọchị 93 kpuchie mba 97 na kọntinent ise, a tụrụ aro ka emee nke abụọ nke World March maka Udo na Ọchịchị Ọchịchị 2019-2020, oge a na-apụ na ịlaghachi n'otu ebe mbido maka mezuo ebumnuche dị iche iche.
Kpesa, mee ka ahụ anya, nye olu
Nke mbu, ikwughari onodu ihe ojoo nke uwa na agha na-abawanye na mmefu ego na ngwa agha, ebe otutu ebe uwa a na ahapuru otutu nri na mmiri. Nke abuo, ime ka a hu ihe oma na ndi mmadu di iche-iche na ndi mmadu, ndi otu na ndi mmadu na-etolite n’ọtụtụ ebe n’inye ndi mmadu ikike, ikpa oke, mmekorita, udo n’udo na mmegide. Na, n'ikpeazụ, inye olu maka ọgbọ ọhụụ chọrọ iweghara, wụnye ọdịbendị nke imeghị ihe ike na echiche mkpokọta, agụmakwụkwọ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ọha mmadụ ... N'otu aka ahụ ọ hapụrụ afọ ole na ole wụnye mmata ebe obibi.
Iji mee mmemme nke njedebe nke ụwa a, aga-eme ọtụtụ ihe omume ga-enwe ọnụnọ nke ọtụtụ ndị na-emegide ya. Na Satọde Mach 7, n’elekere iri na abụọ nke ehihie, ‘Egwuregwu egwu ejima maka Udo, Ọgba aghara na'wa’ nke obere Footkwụ Na-eme Mba ()tali) ga-ewere ya na thelọ Azụlite Eke na Ulo na Manuel Núñez de Arenas. (Puente de Vallecas) na Ateneu Cultural (Manises-Valencia). Ihe omume a ga - eme na El Pozo Cultural Center (Avenida de las Glorietas 12-19, Puente de Vallecas) na nnabata n'efu ruo mgbe enwere ike iru ya.
Ememe mmechi nke Machị
N'ehihie, n'elekere 18:30 nke ehihie, a ga-enwe 'Mmechi Mmechi nke March' na amụma nke ụzọ, nnabata site na kọntinenti dị iche iche, okwu mmechi na mmetụ egwu. Otu ga-ewere ọnọdụ Arablọ Arab (Calle de Alcalá, 62) nwekwara ohere. N’echi ya, Sọnde, Machị asatọ, ga-eme n’ehihie na Puerta del Sol, na kilogram 8, mmechi ihe atụ nke njem nke ụwa ụwa nke abụọ nke ga-akwụsị ọnwa ise njem site n’otu ebe. ebe njem a bidoro. N'elekere 0:12 nke ehihie, n’ihu ụlọ ahịa ebe a na-ere anụ ụlọ Mallorcan, a ga-ejikọ ụmụ nwanyị si n'ọdịbendị ihe ngosi nke Udo na Ọgba aghara, ndụmọdụ ga-eme ka onye ọ bụla chọrọ isonye na mmegharị a. Iji wepu ya, ndi n’enye ihe n’enye nkwado ndi nwanyi nke ga eleta etiti isi obodo n’ehihie.
Drafting: Martine Sicard (World enweghị Agha na Ime Ihe Ike)
Ozi ndị ọzọ na:
Categories Pịa Ihe edeturu Igodo bọtịnụ
World March erutere na Trieste
Paris na mpaghara ya na-eme emume Machị
Gwa anyị echiche gị
Enwere m ike ịmepụta akaụntụ
Mgbe ịbanye na nke mbụ ya na bọtịnụ nbanye, anyị na-anakọta ozi profaịlụ ọha na akaụntụ gị site n'aka onye na-ahụ maka ntanetị, dị ka ntọala nzuzo gị. Anyị na-enweta adreesị ozi-e gị iji mepụta akaụntụ maka gị na weebụsaịtị anyị. Ozugbo ị mepụtara akaụntụ gị, ị ga-abanye na akaụntụ a.
ihe ọhụrụ na ntinye azịza ọhụrụ nye ihe m kwuru
Kwe ka m jiri adreesị ozi ịntanetị m zitere m ozi mgbe mmadụ kwuru ihe (enwere ike ịwepu aha n'oge ọ bụla).
Nkwupụta banyere ọnọdụ ọrịa
Machị 8: March ga-emechi na Madrid
EGO NA-EKWU EGO
Omume kachasị ọhụrụ na El Dueso na Berria
Ecuador mechiri World March
© 2020 Haziri 4P Marketing
N'elu elu wpDiscuz
Print Enyi na Enyi